Maxay yihiin siyaabaha aad u isticmaali karto si aad dib ugu noqotid SEO-ga maxalliga ah?
Backlinks waxay door weyn ka cayaareysaa habka bogsashada bogga oo saameyn weyn ku leh qiimeynta mashiinka raadinta. Muhiim maaha in aad leedahay ganacsi maxalli ama shirkad weyn, si aad u abuurto joogitaanka internetka ee xooggan oo aad u baahan tahay inaad dib u eegto SEO. Su'aashu waa sidii dib loogu soo celin lahaa ganacsigaaga muddo gaaban? Maqaalkani waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad ogaatid sida loo helo ololaha dhismaha ee xaafaddaada.
Dhismaha xiriiriyaha deegaanka
Haddii hawshaada aad ku dhisto boggaaga xaafadaada, waa inaad ogaatid waxa aad raadineysid markaad dhiseyso xiriirada. Dib-u-dhiska maxaliga ah waxaa lagu dhisay ulajeeddad si loo hagaajiyo xiriirka udhaxeeya boggeeda.
Khabiirada mashiinka raadinta maxalliga ah waxay ka shaqeeyaan dhinacyada naqshadaynta maxalliga ah sida hagaajinta macluumaadka xiriirka, sameynta koonto ganacsi ee Google MY Business, abuurista mawduucyada kali ah, iyo dhisidda xiriirka website-ka. Dhammaan dhinacyada soo-dhaweynta waxaa loo adeegsadaa inay abuuraan ganacsi internet-ka ah oo ku jira natiijooyinka raadinta bini-aadanka ee shuruudaha raadinta khaaska ah ee geotargeted. Ololaha dhismaha ee xaafaddaada waa inuu ku siiyaa fursad aad kula hadasho dhagaystayaasha deegaankaaga.
Your saamilaha suuqa saameyn ku yeelan karaan website-yada waaweyn iyo kuwa sameynta ah sida ay leeyihiin iyaga oo ah ganacsiyada yaryar ee degaanka kuwaas oo si fiican ugu jiri kara boggaga sahlan. Si kastaba ha ahaatee, maaddaama ay saameyn ku yeeshaan warshadahaaga, helitaanka xiriirka iyaga ayaa noqon doona fursad aad u fiican oo ku saabsan kor u qaadida ogaanshaha garashadaada.
Sida caadiga ah, ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin waxoogaa xaddidan oo miisaaniyad ah mana awoodi karaan inay dib u soo celiyaan weriyeyaasha waaweyn sida Forbes, Entrepreneur, New York Times, iyo kuwo kale. Taa bedelkeeda, Ganacsiga maxalliga ah ayaa laga yaabaa inuu ka faa'iidaysto daabacaadda boosteejooyinka ay ku leeyihiin mareegaha warbaahinta maxaliga ah, blogsyada loogu talagalay hawlaha gudaha ama ilaha wararka.
Citations waa WAA INAAD!
Khadka ugu hooseeya ee ololaha dhismahaaga isku xira, waxaad bilaabi kartaa dhismaha caddaaladda iyo hagaajinta macluumaadka aad hadda ku sugan tahay.
Citations waxay ku fiican yihiin ganacsiyada yaryar marka ay bixiyaan awood ay ku meeleyn karaan macluumaadka xiriirka meelo waxayna ku siinayaan fursad aad ku xirto qaar ka mid ah ilaha websiyada leh ee la isku halleyn karo kuwaas oo aan ku hawlan waxqabadka spam ee khiyaanada leh waxaana laga yaabaa inay gaarto celceliska isticmaalayaasha haddii ay ku daraan shuruudaha raadinta yar yar. Ujeedada ugu muhiimsan ee farsamadani waa in aad hesho magacaaga caanka ah.
Sidee dib loogu eegaa SEO-ga maxalliga ah?
Ganacsatada internetka oo dhisto olole xayeysiinta macaamiisha ah ee caalamiga ah ayaa u baahan in ay noqdaan hal-abuurno kuwa ka shaqeeya hannaanka raadinta moobiillada caalamiga ah ee shirkadaha waaweyn sababtoo ah fursadaha isku xirnaanta ee goobtan waa kooban. Milkiilayaasha bogagga ayaa ku dhibtoonaya inay ku daraan shuruudaha raadinta deegaanka aan ku habooneyn oo aan haysan mugga raadinta.
Haddii aad raadineyso fursadaha maxaliga ah ee ganacsigaaga, waa inaad fahamtaa halka ay xuduudaha dhulkaasi ka dhigan yihiin oo ay ka dhigaan meeshan asalka ah ee ganacsigaaga. Aqoonsigaaga xaddidaadku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka fikirto wax abuur leh oo si joogta ah u hesho fursado fiican oo ku jira qaybtaada oo kugu hogaamin doona qiimaha ugu badan ee bogga internetka ee ganacsigaaga internetka Source .